उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ हृदयघातको ख’तरा ! - Onlinenews Global
June 17, 2021 laxmiLeaveaComment on उसिनेको अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ चिज, निम्त्याउँछ हृदयघातको ख’तरा !
कागती: कतिपय मानिस जो अण्डा खान मन पराउँछन्, उनीहरु अण्डामा कागतीको रस हालेर खान्छन् ताकी यसको स्वाद राम्रो होस्। तर कहिले पनि यस्तो गर्नु हुँदैन। किनभने त्यसो गर्दा रक्तनलीहरूलाई हानी हुन्छ र हृदयघातको खतरा पनि हुनसक्छ
केरा: त्यस्तै, यो कुराको पनि ख्याल राख्नुहोस् कि अण्डा खाएपछि केरा कहिले पनि खानु हुँदैन। अन्यथा यसले पेटसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, अण्डा खाएपछि भुलेर पनि केरा नखानुहोस्। ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****